YEYINTNGE(CANADA): Sunday, December 04
by Phwe phwe face book.
one of the happiest day of my life...i met with my superhero!!! ~______~
yayyyy!!!!!!!!i got her autograph!!!! ~__________~
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/04/20110အကြံပြုခြင်း
India perspective on Clinton's visit to Burma
အဖွဲ့​ချုပ်​ခေါင်း​ဆောင် ဦး​တင်ဦး​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မည်မဟုတ်
Published on December 4, 2011 by ပီတာအောင်
လာမယ့်​ ကြား​ဖြတ် ​ရွေး​ကောက်ပွဲ​တွေမှာ လွှတ်​တော် ကိုယ်စား​လှယ်​လောင်း​အဖြစ် ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အ​ရွေး​ခံမှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် ​ခေါင်း​ဆောင် ဦး​တင်ဦး​က ​ပြောကြား​လိုက်ပါတယ်။
“အသက်ကြီး​ပြီဗျာ။ လူငယ်​တွေကို အစား​ထိုး​ချင်ပြီဗျာ၊​ လူငယ်​တွေ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျ​နော်က​တော့​ မဝင်ပါဘူး​ခင်ဗျ။ ​တော်​လောက်ပါပြီ၊​ လွှတ်​တော်ထဲမှာ ​ပြောချင်ဆိုချင်စိတ်လည်း​ မရှိပါဘူး​ခင်ဗျာ” လို့​ အသက် ၈၅ နှစ် အရွယ် ဦး​တင်ဦး​က ဒီဗွီဘီကို ​ပြောပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ ပါတီရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက်​တွေ ​အောင်မြင်​အောင် ကိုယ်စွမ်း​ဉာဏ်စွမ်း​ ရှိသ​လောက် ဝန်း​ရံပံ့​ပိုး​ ကူညီသွား​မယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်​ဟောင်း​နဲ့​ အန်အယ်လ်ဒီ စတင်ထူ​ထောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့​တဲ့​ ဦး​တင်ဦး​ဟာ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ ၁၉၉၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲနဲ့​ ၂၀၁၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ကျင်း​ပချိန်​တွေမှာ ​နေအိမ် အကျယ်ချုပ်နဲ့​ ထိမ်း​သိမ်း​ခံခဲ့​ရတာပါ။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် အ​နေနဲ့​ မှတ်ပုံပြန်တင်ပြီး​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ​တွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်​နေ့​က ဆုံး​ဖြတ်လိုက်ပြီး​နောက်မှာ ဦး​တင်ဦး​ အပါအဝင် ၂၁ ဦး​က ပါတီထူ​ထောင် လို​ကြောင်း​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ​ကော်မရှင်မှာ ​လျောက်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီအ​နေနဲ့​ တည်​ထောင်ခွင့်​နဲ့​ မှတ်ပုံတင်ခွင့်​ ရပြီး​ပါက ပါတီဝင်​တွေကို ပြန်လက်ခံဖို့​ ပြင်ဆင်မှု​တွေ ပြုလုပ်​နေတယ်လို့​ သိရပါတယ်။
ပါတီဝင်အ​ရေအတွက် တသန်း​လောက်ထိ ​လျောက်ထား​နိုင်တယ်လို့​လည်း​ ပြည်တွင်း​ထုတ်ဂျာနယ်​တွေမှာ ခန့်​မှန်း​ချက်​တွေ ထွက်​ပေါ်​နေပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီအ​ရေအတွက်ကို အန်အယ်လ်ဒီပါတီက​တော့​ အတည်ပြု ​ပြောဆိုခြင်း​ မရှိပါဘူး​။
ပါတီ ​ပြောခွင့်​ရသူ ဦး​ညဏ်ဝင်း​က “ကျ​နော်တို့​ အ​ရေအတွက်ကို အဲဒီလို ဆုံး​ဖြတ်ချက် သတ်မှတ်ချက် မရှိပါဘူး​။ မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင်း​က စည်း​ကမ်း​နဲ့​ ညီညွတ်တာ ကျ​နော်တို့​သတ်မှတ်ချက်နဲ့​ ညီညွတ်တာ ဝင်လာသမျှ လက်ခံရမှာပဲ​လေ အ​ရေအတွက် ​ပြောတာက​တော့​ ကိုယ့်​ဘာသာကိုယ် ခန့်​မှန်း​ပြီး​ ​ပြော​နေကြတဲ့​သ​ဘောပါ။”လို့​ပြောပါတယ်။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ်ဟာ ပြည်နယ်နဲ့​တိုင်း​ မြို့​နယ်​တွေမှာ ရုံး​ခွဲ​ပေါင်း​ ၃၀၀ ​လောက် ဖွင့်​လှစ်ထား​တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲ ကျင်း​ပတဲ့​ ကာလဝန်း​ကျင်မှာ ပါတီဝင် အ​ရေအတွက် ၂ သန်း​လောက် ရှိတယ်လို့​ ခန့်​မှန်း​ခဲ့​ကြဖူး​ပါတယ်။ ​နောက်ပိုင်း​မှာ အာဏာပိုင်​တွေက ပါတီရုံး​တွေကို ဝင်​ရောက် စီး​နင်း​ချိတ်ပိတ်ပြီး​နောက် ပါတီဝင်​တွေရဲ့​ အ​ထောက်အထား​ မှတ်တမ်း​တွေ ဆုံး​ရှုံး​သွား​ခဲ့​ရတာပါ။
မြန်မာအစိုး​ရက​တော့​ အန်အယ်လ်ဒီကို တည်​ထောင်ခွင့်​ပြု ​လျှောက်ထား​ချက်ကို ခွင့်​ပြုခြင်း​ မရှိ​သေး​တဲ့​အပြင် ၂၀၁၀ ​ရွေး​ကောက်ပွဲအပြီး​ လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်​တွေအတွက် ကြား​ဖြတ်​ရွေး​ကောက်ပွဲ​တွေကိုလည်း​ လာမယ့်​ ၃ လ အတွင်း​ ကျင်း​ပဦး​မှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ကြေညာထား​ပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/18524
by Burma VJ Media Network on Sunday, December 4, 2011 at 2:07am
by Maung Maung Wann on Saturday, December 3, 2011 at 9:06pm
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဟယ်လာရီကလင်တန် တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ဆုံဆည်းကြတာတွေကို ကြည့်ရတာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ အရောင်အသွေးစုံလင်းလက်တောက်ပနေကြတာမြင်တော့ ကျနော်တို့ပြည်သူတရပ်လုံးလည်း အဲ့သလို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေကြရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ လို့တွေးမိတယ်။ ပြည်သူတွေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ မလွတ်မြောက်သေးသရွေ့၊ ကျနော်တို့ ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေကို လွှတ်မပေးသေးသရွေ့ကတော့၊ ရေးစရာရှိတာတွေကို ဆက်ပြီးရေးနေဖြစ်အုံးမှာပါ။)
ပြောင်းအသေးနဲ့ ချိန်လို့သာပေါ့ အစိုးရသစ်ကြီးရယ်
မကြာသေးခင်ရက်များအတွင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီကို ခဏအလည်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားမိတ်ဆွေတဦးက ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေကို ပြောပြတယ်။ “ ပုဇွန်တောင်၊ ရေကျော်၊ တောင်ဥက္ကလာပ လို နယ်မြေတွေအပါအဝင် ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာ၊ ညနေစာ စားစရာ မရှိတော့ ပဲကြီးလှော်တွေကို အစာပြေစား ရေနဲ့မျောချကြတယ်။ လူမြင်တဲ့အခါကျတော့ သိတ်မစာလို့ ညနေစာ မစားဖြစ်တော့တာ လို့ ပြောကြရှာတယ်။ ကျနော်တို့အချင်းချင်းသိနေတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ဆာလောင်မှုတွေကို ဖော့ပြောနေကြတယ် ဆိုတာ”
သူ့စကားကို နားထောင်ပြီး ချားရပတ်တခုဆီက ပြုတ်ကျသွားသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်။ “အေးဗျာ။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက သည်းခံစိတ်တွေက များတယ်။ ကိုယ့်ကို စော်ကားသွားတာတောင် ခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့ကြည့်တာမျိုးတွေလည်း များတယ်” လို့ စကားဆက်လိုက်မိတယ်။ ကျနော်တို့ အညာရွာဘက်က အဖြစ်အပျက်တခုကို ပြောပြခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့အမျိုးထဲမှာ ဦးထွန်းအေး ဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီးတယောက်ရှိတယ်။ သူက မြို့ကိုမကြာခဏတက်တက်လာပြီး အမျိုးတွေအိမ်မှာလာရောက်တည်းလေ့ရှိတယ်။ သူ အိမ်ကိုရောက်ပြီး သိတ်မကြာခင်မှာ သူ့ရဲ့အနားကို အမျိုးတွေက ဝိုင်းဖွဲ့လာရပ်ကြတယ်။ သူ့ဆီက ပုံတိုပတ်စ၊ ဟာသတွေကို ကြားရတော့မှာဆိုတာ မျှော်လင့်ထားကြတော့ လူတိုင်းက ရယ်မော ဖို့ အသင့်ပြင်ထားတယ်။ ဒီတခါ သူပြောပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပါပဲ။
တရက်မှာ ဘုတလင်ဘက်က ရွာတရွာကို ဓါးပြ ဝင်တိုက်တယ်။ ဓါးပြတွေက ရွာက လူတွေ အားလုံးကို ကွင်းပြင်တခုမှာထုတ်ပြီး နားကပ်၊ဆွဲကြိုးကအစ အကုန်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ “ အဘွားကြီး သေချင်သလား၊ ပြောနေတာကို အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်၊ လက်ထဲမှာ ဖွက်ထားတာ တွေ့လို့ကတော့ လက်ဖြတ်ယူပစ်မယ်။ တခြားနေရာမှာဖွက်ထားရင်လည်း ရှစ်ခြမ်းခြမ်းပစ်လိုက်မယ်။” “ေ-ွးမသား၊ မင်းမိန်းမ မုဆိုးမဖြစ်သွားချင်လို့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်လုပ်နေတာလား အိမ်ထဲက ဖွက်ထားတဲ့ မင်းမိန်းမရဲ့ လက်ကောက်ကို သွားထုတ်” “ ဟို အဖွားကြီး မေးလေးရမ်းရမ်း ရမ်းရမ်း၊ မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်း စမ်းစမ်း လုပ်မနေနဲ့။ သနားတတ်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်။ မသနားတတ်လို့ ဓါးပြလုပ်တာ၊ မျက်ရည်ခံထိုးမနေနဲ့ ခေါင်းဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်။”
-ဟား---အစုံပဲ။ ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်တော့တယ်။ တချို့က ငှက်ကြီးရောင်ဓါးတဝင်းဝင်း၊ တချို့က တော့ နှစ်လုံးပြူးသေနတ်ကို မောင်းတင်သံလုပ်လိုက်၊ သေနတ်ဒင်နဲ့ ရွာသားတယောက်ရဲ့ ခေါင်းကို ထုလိုက်သေးတယ်။ ရွာမှာရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးလည်းတိုက်ယူပြီးရော၊ ဓါးပြတွေလည်း အမှောင်ထဲမှာပျောက်သွားကြတယ်။
နောက်တနေ့မနက်မှာ ဦးထွန်းအေးတို့က ဓါးပြတိုက်ခံရတဲ့ ရွာကို အလည်ရောက်သွားတယ်။ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အဒေါ်ကြီးတယောက် အိမ်ရှေ့ကိုလည်းရောက်ရော၊ အဒေါ်ကြီးက ညက ဓါးပြတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်စုံခင်းတော့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ အဒေါ်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်က တော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်။
“ အောင်မလေး ငါတူရယ်၊ ဓါးပြတွေက သဘောကောင်းရှာပါတယ်။ အဒေါ်တို့ကို ပြောင်းအသေးနဲ့ပဲ ချိန်ရှာတာ။ ပြောင်းအကြီးနဲ့သာ ချိန်လို့ကတော့ အဒေါ်တို့ မလွယ်ဘူး” တဲ့။
ဝိုင်းဖွဲ့နားထောင်နေတဲ့ အမျိုးတွေက မေးတယ်။
“ ဘာလဲဗျ၊ ပြောင်းအသေးနဲ့ချိန်တယ်ဆိုတာ----”
ဦးထွန်းအေးကလည်း မေးတာကို မဖြေသေးဘူး။ ရေနွေးကြမ်းတခွက်သောက်ပြီး အက်တင်ခံနေသေးတယ်။ ပြီးမှာ အားရပါးရပြုံးပြီး
“ ဟာ့ ဟေ့ကောင်တွေရေ- ရွာက လူတွေက နှစ်လုံးပြူးသေနတ်ပြောင်းအဝ ကို ပြောင်းအသေး၊ သေနတ်ဒင် ကို ပြောင်းအကြီး လို့ ထင်တာကွ၊” တဲ့။
ကျနော်တို့မှာ ရယ်သာရယ်နေရတာ စိတ်ကမကောင်းဘူး။ အော်- ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ လို့သာ မှတ်ချက်ချနေလိုက်မိတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့၊ အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီ၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ညာဏစိုး ရဲ့ အင်တာဗျူးကိုနားထောင်ပြီးတော့ ဦးထွန်းအေးပြောတဲ့ ရွာက အဒေါ်ကြီးကို သွားသတိယမိတယ်။
“ဒေါက်တာမြတ်ညာဏစိုး” က ဟယ်လာရီ ကလင်တန် အလည်လာတဲ့ ခရီးစဉ်၊ တွေ့ဆုံပွဲ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၊ ကြံ့ဖွံ့စစ်ခေါင်းဆောင် တယောက်ပြောတဲ့စကားကို ပြန်ဖောက်သည်ချတယ်။ ။ “ မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းမှု လုပ်တဲ့အလုပ်ကို နောက်တခါ မလုပ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်သွားမယ်” ဆိုတဲ့စကားပါ။
ဘုရား-ဘုရား-- ဟုတ်ပါ့မလား။ အမှောင်ထဲမှာ ငှက်ကြီးရောင်ဓါး မိုးထားတဲ့ မျက်လုံးတွေကို မြင်နေရတယ်။ ;ဓါးပြတိုက်ခံရတဲ့ ညမှာ ဘာတွေမျှော်လင့်လို့ရနိုင်သလဲ။ “သနားတတ်ရင် ဘုန်းကြီးလုပ်မယ်။ မသနားတတ်လို့ ဓါးပြလုပ်တာကွ” တဲ့။ ခြိမ်းခြောက်သံကြီးက အသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေဆီမှ လျှို့ဝှက်ပြီး ကြားနေရသလိုမျိုး၊
(၁)၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကို စစ်အုပ်စုက လွှမ်းမိုးဦးဆောင်သွားမယ်။ “အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အချိန်မရွေးလုပ်ခွင့်ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ အချက်က ပါပြီးသားမို့လား။
(၂) စစ်တပ်က လွှတ်တော်ကို အာဏာသိမ်းထားပြီးသားကိစ္စ၊ အာဏာသိမ်းစရာလို လို့လား။
(၃) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အားလုံးက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ စာတင်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူက မလွှတ်တာလဲ။ ဘယ်သူက အာဏာချုပ်ကိုင်ထားတာလဲ။ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီး ဦးသန်းရွှေလား၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေလား။
အော်-- ဒေါက်တာ မြတ်ညာဏစိုး လည်း ရွာက အဒေါ်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီ။
“အောင်မလေး ငါ့တူရယ်၊ ဓါးပြလေးတွေက သဘောကောင်းရှာပါတယ်။ အဒေါ်တို့ ကို ပြောင်းအသေးနဲ့ချိန်လို့သာပေါ့၊ ပြောင်းအကြီးနဲ့များချိန်ရင် အဒေါ်တို့ မလွယ်ဘူး” တဲ့။
ဆန္ဒပြမည့် နေ့စွဲ ၊ အချိန်၊ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲကို ကြေငြာခြင်း
ရက်စွဲ ။ ၅ . ၁၂ . ၂၀၁၁
အကြောင်းအရာ ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးဟောပြော ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် တောင်းခံခြင်း
(၁) ရည်ရွယ်ချက် - အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်သတင်းစကားပေးလိုခြင်း
(၂) နေ့ရက် - ၁၀ . ၁၂ . ၂၀၁၁
(၃) အချိန် - နံနက်(၉း၀၀)နာရီ မှ နေ့လည်(၁၂း၀၀)နာရီ ထိ
(၄) နေရာ - မြို့နယ်မှူး ခွင့်ပြုသတ်မှတ်သော နေရာ
(၅) ဦးဆောင်ဟောပြောမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ - ဦးဝင်းချို ၊ ဦးထောင်ကိုထန်း၊
ဦးဝေဠု ၊ ဦးနေမျိုးဝေ
၄င်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပူးတွဲပေးပို့ပါသည် ။
(၆) ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့်သူများ - ဦးစိုးကြည် ၊ ဦးမင်းအောင် ၊ ဦးဝင်းချို၊
ဦးထောင်ကိုထန်း၊ ဦးဝေဠု၊ ဦးနေမျိုးဝေ၊ ဦးအောင်မျိုးဦး
(၇) ခန့်မှန်းလူဦးရေ - ၅၀ ဦးရေခန့်
(၈) အစီအစဉ် - စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ် / စာရွက်ဝေခြင်း နှင့်
ဟောပြောခြင်း ပြုလုပ်မည် ။
(၉) ၀န်ခံချက် - ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက “ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့်
ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ” နှင့်ခွင့်ပြုမိန့်ပါ
စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
(၁၀) ၀န်ခံကတိပြုသူများ၏လက်မှတ်များ -
(က) လက်မှတ် - ……………..………………………………………
အမည် - ……………..………………………………………
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် - ………………………………………………………
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - ………………………………………………………
ဖုန်းနံပါတ် - ………………………………………………
ဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေ သည် ဒီမိုကရေစီ နည်းမကျ သေး
by FNG on December 4, 2011
သီရီထက် ၊ ၊မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သောကြာ နေ့ က
ဥပဒေ အဖြစ် လက် မှတ် ရေး ထိုး အတည် ပြု လိုက် သည့် ဆန္ဒပြ ခွင့် ဥပဒေ မူကြမ်း
သည် ဒီမိုကရေစီ နည်း လမ်း မကျသေးဟု ရန်ကုန် မြို့မှ တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူ များ
က သုံးသပ် ပြောကြား သည်။
စုဝေး ဆန္ဒပြ ခွင့် ကို ၅ ရက် ကြိုတင် အကြောင်း ကြား ရခြင်း မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း နိုင်ငံ ၊ အမေ
ရိကန် နိုင်ငံ တို့နှင့် လေးရက် ခွဲ ပင် ပို နေ သည် ဟု သူတို့က ထောက် ပြ ကြ သည်။အစိုးရ၏
မလျှော်ကန် မှု နှင့် တရား နည်း လမ်း မကျ မှု များ အတွက် အစိုးရ ဆီ မှ ခွင့် ပြု ချက် ယူစရာ
မလို ပဲ ပြ သ နိုင် သည် ဟု ယခု ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် အော်ကျူပိုင်း အုခ်လန် ဆန္ဒပြပွဲ
တွင် ပါဝင်သည့် မြန်မာ လူမျိုး ကို ရစ်ချတ် ထွန်းနိုင် က ပြောသည်။သူက ” ဒီမှာ လေ အမေရိ
ကန် တစ်နိုင်ငံ လုံး ဆန္ဒပြ နေတာ ပဲ မြို့ တိုင်းပဲ ဘာမှ ခွင့် ပြု ချက် ယူစရာ မလို ဘူး ၊ အစိုး ရ
အဆောက် အဦ တွေ ၊ အများ ပြည်သူ နဲ့သက် ဆိုင် တဲ့ နေရာ တွေမှာ ပြ သ မယ့် ဆန္ဒ ပြ ပွဲ
တွေ အတွက် က တော့ ခွင့် ပြု ချက် မဟုတ် ဘူး ၊ တစ်ရက် ကြို အကြောင်း ကြား ရင် ရတယ်။
မနက် အကြောင်း ကြား ပြီး နေ့ လည် ပြ လို့ လဲ ရတယ် ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် လည်း ပြီး ခဲ့ သည့် နှစ် က ရှပ် နီ ၊ ရှပ် ၀ါ ဆန္ဒပြ ပွဲ များ ဖြစ်ရာ တွင် မည်
သည့် အဖွဲ့အစည်း က မျှ ကြို တင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံ ခြင်း မရှိ ဟု အဆိုပါ ဆန္ဒပြ ပွဲ
များတွင် ပါဝင် သည့် ဘန်ကောက် အခြေစိုက် ဒေသခံ ရှပ် နီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ
ကရာဝခ် ၀ါတနာ က FNG ကို ပြောသည်။
စုဝေး ဆန္ဒပြ ခွင့် ကို အခြေအနေအကြောင်းကြောင်း များ ကြောင့် ဆိုကာ ခွင့် မပြု ပေး နိုင်
သည့် အချက် လည်း ပါဝင် နေသဖြင့် ထို အချက် မှ ဥပမာ အား ဖြင့် အစိုးရ ၏ မလျှော်ကန်
သည့် လုပ် ရပ် များ ကို ဆန့် ကျင် ကန့် ကွက် လိုသူများ အနေဖြင့် ခွင့်ပြုချက် တောင်းပါက
အာဏာ ပိုင် များ က ခွင့် မပြု ပဲ နေနိုင် သည်။
ဆန္ဒပြ ခွင့် အတွက် ပါဝင်မည့် လူဦးမည် ၊ မည် သည့် ရည်ရွယ် ချက် နှင့် တာဝန်ခံ စီစဉ်မည့်
သူများ ၏ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င် ကို လည်း ဆိုင်ရာ သို့ပေး ရမည် ဟု ဥပဒေ တွင် ပါရှိ သည်။
ဆန္ဒပြခွင့် အား သက်ဆိုင်ရာ သို့မတင် ပဲ ဆန္ဒပြ လျှင် ဥပေဒ ကို ချိုးဖောက် သည် ဆိုကာ
ဥပေဒေ အရ အရေးယူ ခံရ နိုင် သည့် အနေ အထား မျိုးလည်း ယခု ဆန္ဒပြ ခွင် ဥပဒေ တွင်
တွေ့ ရ သည် ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစု ၀င်များ ကွန်ယက် မှ တာဝန် ရှိ သူ တစ်
ဦး က သုံးသပ် သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် စစ်တပ် က နိုင်ငံရေး အာဏာ မှာ ပါဝင်ပတ် သက်နေသမျှ ဆန္ဒပြ မှု ၊ လူထု
အုံကြွမှု တွေ ဟာ တစ်ချိန် မဟုတ် တစ်ချိန် ပေါ်လာ နိုင်စရာ အကြောင်း ရှိတယ် လို့၂၀၀၇
မျိုး ဆက် ကျောင်း သား တစ်ဦး က ပြောသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စား ပြု ကော်မတီ မှဦးထောင်ဂိုထန်း ၊ ဦးဝင်းချို၊ ဦးနေမျိုးဝေ စသည့်
နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား သူ လူပုဂ္ဂိုလ် များ သည် ယခု လ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ဆန္ဒပြကြ မည် ဖြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မင်ဒဲလား၊ ဦးသိန်းစိန်က ဒီကလက်...
အဖွဲ့​ချုပ်​ခေါင်း​ဆောင် ဦး​တင်ဦး​ ​ရွေး​ကောက်ပွဲဝ...
လှည်းကူးမြို့ နယ်ရှိ NDF ပါတီရုံးခွဲဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ...
ဆန္ဒပြမည့် နေ့စွဲ ၊ အချိန်၊ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲကို...